बिहानी पाख श्रीमतीलाई खुसि बनाउँन खोज्दा…. – Online Nepalaja
February 16, 2021 84
यदि आफ्नो श्रीमानलाई बेडमा खुसी राख्ने तरिका आउँछ भने तपाईं निकै भाग्यमानी हुनुहुनेछ । बेडमा अल्छीपन नदेखाउनुहोस् । श्रीमतीहरु आफ्नो श्रीमानसँग बेकारमा बहस गरेर कुरा लम्ब्याउने गर्दछन् । जसले गर्दा सम्बन्ध नै खतरामा पर्न सक्छ । तपाईं भने यस्तो गर्नबाट बच्नुहोस् ।
यस्ता घटना दु’र्लभ हुनेसमेत जज सिन ग्रा’न्टले बताउँदै घटनाका सबुतहरुले लेरोयका गतिविधि नियतवश वा कसैलाई हा’नि पु-याउने किसिमको नदेखिएको हुनाले उनलाई कुनै कार्बाही नगरिने बताएका हुन्।
यसलगत्तै आफ्नो घरमा दुई जना अपरिचित व्यक्ति छिरेको भन्दै प्रहरीलाई ती घरधनीले खबर गरेका थिए। यस घटनाको केही मिनेटपछि उनीहरु सही घरमा छिरेका थिए। प्रहरीले लेरोय र उनका साथीलाई फोन गरिएको एक घण्टामा पत्ता लगाई पक्राउ गरेका थिए।
Prevएउटा अ’पहर’णका’रीको ‘अपराध यात्रा’, नेपाल प्रहरीको पञ्जाबाट उम्किएर दार्जिलिङमा कपडाको व्यापार !
Nextमलाई यौ’नको यो प्रकृया सिकाउँदा निकै आनन्द लाग्छ (भिडियो सहित्)
कक्षा १२ को नतिजा भर्खरै सार्वजनिक, यसरी हेर्नुहोस
प्रयोग भइसकेको क’ण्ड’म बटुलेर महिलाले गर्थिन यस्तो काम, प्रहरी पर्यो चकित् (1426)
भाइरल हुनकै लागि यी युवतीले जे खाइन हेर्नुहोस (356)